जानी राखौं : कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ ? | Matrisandesh
काठमाडौं । गर्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन । आफ्नो योजनाअनुरूप सहजै गर्भधारण गर्न सकिन्छ । दम्पतीलाई यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ । उसो भए गर्भधारणका लागि कुन बेला, कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने ?
कसरी रहन्छ गर्भ ?
जसरी बजारमा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध छ त्यसरी नै ओभुलेसन (डिम्ब निष्कासन० डिटेक्सन टेस्ट किट पनि सहजै पाइन्छ । यसबाट डिम्ब निष्कासन भएनभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।